Soo -saaraha Robot -ka iyo Warshadda Robot -ka ee ugu Wanaagsan FAUCI Hawada | FAUCI
Jeermiska hawada, jeermiska buufinta
iyo nadiifinta mashiinka isku dhafan
Dhismayaasha xafiisyada, hoteellada, suuqyada waaweyn, dhismayaasha ganacsiga, hoolalka bandhigga, qolalka shirarka, iwm.
WAXYAABAHA LA QABAN KARO
dabaqa jilicsan oo adag:
Isticmaalka gaarka ah ee koloriin kaarboon laba -oksijiin saafi ah oo sii -deyn ah iyo teknolojiyadda firfircoon ee firfircoon ee ROS si dhakhso ah loogu dilo fayrasyada iyo bakteeriyada hawada ku xeeran, kala daadisa oo ka saarta gaasaska waxyeellada leh sida formaldehyde;
Taageer moduleka riixitaanka boorka, looma baahna in si joogto ah loo beddelo marada riixitaanka boorka, qalliin aan walwal lahayn;
La-qabsiga dabaqyada adag iyo roogagga agabyada kala duwan, nadiifin aan caqabad lahayn;
Naqshad gacmeed dib -u -noqosho leh, is -beddel dabacsan oo u dhexeeya gacanta iyo habka caqliga leh;
Nadiifinta/faaruqinta/riixitaanka boodhka iyo isku-darka lakabka-ka-badan ee kala-shaqaynta badan, burush duuban + burush dhinac + naqshad riixaya boorka, geesaha dhintay si fiican uma nadiifin;
Waqtiga bilowga hawsha la qorsheeyay. U isticmaal nabad badan oo maan ah;
Habka hawlgalka ugu yar, helitaanka;
Shaqada iskaanka dib -u -bilowga Breakpoint, hubso in meelayntu dhammaatay;
Dareen-dareemayaal badan iyo meelaynta saxda ah ayaa la isku daray, oo horseed u ah warshadaha teknolojiyadda guur-guura oo dhammaystiran;
khariidad-ku-tiirsanaan, soo noqnoqosho madaxbannaan, qorshaynta dariiqa otomaatiga ah, daboolidda waqtiga-dhabta ah, jawaab-celin dabacsan oo ku wajahan duruufo adag oo la beddeli karo.
Cabirka Badeecada 700 (L) *570 (W) *850 (H) mm
Ballaca xaaqidda (buraashka labada dhinac) 740mm
Jeermiska ugu sarreeya 1200㎡/h
Codbixinta La Qiimeeyay 24V
Awooda bateriga Li-lon 40Ah
Nolosha Batariga 2h
Awoodda Ugu Badan 1100W
Awooda mootada wadista ee la qiimeeyay 300W
Awooda mootada buraashka la qiimeeyay 200W
Awooda mootada buraashka la qiimeeyay 25W
Awoodda matoorka nuugista ee la qiimeeyay 560W
Mugga qashinka qashinka 2.5L
Faakiyuumka ugu badan 181Pa
Mugga nuugista ugu badan 2.0m³/daqiiqo
Qaab -dhismeedka dareemayaasha Lidar, kamarad qoto dheer *3, kaamerada muuqaalka kore (ikhtiyaari), dareeraha ultrasonic, qalabka ka hortagga shilka ee elektarooniga ah, farsamada ka-hortagga dhibicda
geeska fuulidda 8 °
Xawaaraha safarka 0-3.6km/h
buuq ordaya <70dB (A)
MUUJINTA MUHIIMKA MUHIIMKA AH
Si otomaatig ah u hel raso
Si otomaatig ah ugu dallac batteriga
FAUCI Robot Charging Pile waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu kordhiyo nolosha batteriga ee robotka.
Hadda lagu dabaqi karo moodeelka: FAUCIMAPR O1
Rakibaadda lacag -bixinta ayaa sii dheereysay nolosha batteriga ee robotka. Marka baterigu yaraado, robotku si otomaatig ah ayuu u soo laaban karaa si uu ugu xiro raashinka lacag -bixinta si loo buuxiyo. Marka buuxinta la dhammeeyo, waxay isla markiiba dib ugu noqon kartaa shaqada.
Cabirka Badeecada 450 (L)*420 (W)*615 (H) mm
Awoodda Ugu Badan 900W
Danab la qiimeeyay 110V
Qoyaanka Hawlgalka - 10 ℃ ~+45 ℃
Heerkulka Hawlgalka 20%~ 75%RH
Heerkulka Kaydinta - 40 ℃ ~+45 ℃
Qoyaan Kaydinta 20%~ 93%RH
Shuruudaha rakibaadda Voltage: 110V current Socda korontada: 10A ， Meesha weelka Triplex
Xiga: FAUCI Mashiinka Nadiifinta Hawada
Robot Nadiifinta Hawada
Robot -ka Hawada sifeeya
Robotka Hawada Sterilizer -ka
Vacuum Robotka ugu Fiican 2021
Nadiifiye Hawada Robot
Robotka Uvc Disinfection Robot
Robot -ka Nadiifiyaha